पश्चिम अफ्रिकी राष्ट्रमा इबोलाको नयाँ महामारी, के हो इबोला ? – Sodhpatra
पश्चिम अफ्रिकी राष्ट्रमा इबोलाको नयाँ महामारी, के हो इबोला ?
प्रकाशित : ६ फाल्गुन २०७७, बिहीबार १०:५२ February 18, 2021
पश्चिम अफ्रिकी राष्ट्र गीनीले तीन मृत्यु र आठ सङ्क्रमणका घटना पुष्टि भएपछि इबोलाको नयाँ महामारी घोषणा गरेको छ। पछिल्लो महामारी दक्षिण पूर्वी गीनीको एउटा अन्त्येष्टि समारोहबाट फैलिएको बताइएको छ। सन् २०१३ देखि २०१६ सम्म पनि त्यही क्षेत्रमा इबोला महामारी देखा परेको थियो।
इबोलाको सङ्क्रमण पुष्टि भएका वा आशङ्का गरिएका व्यक्तिको उपचारमा संलग्न भएका स्वास्थ्यकर्मीमा बारम्बार यो समस्या देखा पर्दै आएको छ।
लाइबेरियाका राष्ट्रपति जोर्ज वेयले देशका स्वास्थ्य अधिकारीहरूलाई गीनीसँगको सीमामा रहेका नगर तथा गाउँहरूमा तत्कालै परिचालित हुन र इबोला नियन्त्रणका कदमहरू चाल्न निर्देशन दिएका छन्। कङ्गोमा देशको पूर्वी क्षेत्रमा इबोलाको चौथो नयाँ सङ्क्रमणको घटना देखा परेको पुष्टि त्यहाँका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले गरेका छन्।